Indlela yokukhetha Inkomo Yobisi
Izinkomo zobisi ezikhethiwe ukuthenga kumele zihlolwe ukuze zithole ubunikazi bazo. Identity inqunywa umdwebo wemibala (i-Holsteins) kanye nophawu lwendlebe (lwama-Jerseys). Ukwengeza inkomo ingabonakala ngezici zomzimba (ikakhulukazi umlomo, amazinyo, izinyawo nemilenze, udder kanye nama-teats) kanye nesimo somzimba.
Izidakamizwa kufanele zihlolwe (zizwa ngesandla) ngezibonakaliso zendawo eyomile nokuvuvukala noma izibonda ezibonisa ukutheleleka kwe-mastitis. Isikhumba sembele kufanele siphendule, silky ekutheni ngenkathi umbele akufanele ube mkhulu kakhulu futhi ngokuqinile unamathele emzimbeni enezimpawu eziqinile zokumiswa.
Ukuhlolisisa izilwane eduze kwakuzokwenza kube nesibonakaliso sokwemvelo. Ungacabangi ngokucwaninga ukuthenga izinkomo emibonweni ye-show-rings njengoba zingase zibize kakhulu ngenkathi ubisi lwabo bekhiqiza amathuba angase kube ngokungangabazi.
Izinkomo ezinhle kakhulu zokuthenga yizo ezizokhiqiza ubisi obuningi kakhulu obusetshenziselwa ukudla okufanayo epulazini elisha.
Ukuthenga Izinkomo Zobisi Ngebhajethi encane
Ukuthenga izinkomo ngebhajethi elinganiselwe? Cabanga ukuthenga izinkomo ezindala zokudla njengoba intengo yabo yokuthengisa ingase ibe ngaphansi ngenxa yesidingo esincane sezilwane ezindala. 'Inani lokubulala' livame ukulingana nelungelo 'lokukhiqiza' ubisi. Kodwa-ke, izinkomo ezinjalo kufanele zikhulelwe ngenkathi zikhiqiza ubisi emazingeni aphakeme kunezindleko zokudla zansuku zonke.
Ukuqinisekisa ukukhiqiza ubisi okuqhubekayo unyaka wonke, uthenge izinkomo ezilahlayo ekukhuleni kwamantombazane kanye nezinkomo ezikhulelwe zokupheka. Uma uthenga izinkomo ezomile, usuku olulindelekile lokulondoloza kufanele lube phakathi kwezinyanga ezimbili ngosuku lokuthenga.
Uma izimali ezingaphezulu zitholakalayo, thola imfuyo ephezulu yezakhi zofuzo kuqala emitholamini yesibili yesikhumba. Ngokuvamile banezinkinga ezincane zokuxazulula ukwedlula izinhlanzi. Lapho uthenga izilwane ezikhulelwe, ulwazi olulandelwayo lwezinkomo (izinkunzi) kufanele lwaziwa ngokulungiselela izinkinga ezikhona zedaysiki lapho kutholakala khona. UDystocia yilapho ithole linyanyiswa ngesikhathi sokugqoka.